Kuboshwe ongafunanga ukusukuma kuculwa iculo lesizwe | isiZulu
Kuboshwe ongafunanga ukusukuma kuculwa iculo lesizwe
Zimkhalele umshayeli wamatekisi 'ogwaze wabulala omunye' erenki
Kuboshwe inqwaba yabashayeli ngempelasonto ngahlukene
Kuboshwe amaphoyisa amathathu ngele-laptop
Manila - Ungene obishini owesilisa oneminyaka engu-20 ubudala ngokuhlala phansi alibale ukudla u-popcorn ngesikhathi kuculwa iculo lesizwe.
Ngokombiko weCoconuts, uBayle Einstein Gonzales, 20, ubebukela ifilimu iJustice League e-cinema eseClark, ePampanga enyakatho yezwe lasePhilippines ngempelasonto edlule.
Ezweni lasePhilippines kufana nosiko ukuba kuculwe iculo lesizwe, iLupang Hinirang, ngaphambi kokuba kudlale ifilimi yokugcina yosuku.
Kuphinde kube nemithetho eqinile mayelana nokuhlonishwa kwefulegi kanye neculo lesizwe.
Abantu ababanjwe bengalihloniphi ifulegi noma iculo lesizwe bangahlawuliswa imali esukela ku-PHP5 000 kuya ku-PHP20 000 (okuyimali elinganiselwa ku-R1 400 kuya ku-R5 600) noma bagwetshwe unyaka bebhadla ejele.
OLUNYE UDABA: Ushone kabushlungu obezama ukuthatha i-selfie
Nakuba beyingcosana kakhulu abantu aseke bathweswa icala ngale mithetho, uBayle ubenebhadi njengoba ebonwe yisikhulu sikahulumeni, u-Elmer Cato, e-cinema ngesikhathi enqaba ukusukuma kuculwa elesizwe, waqhubeka nokuzidlela u-popcorn wakhe.
UCato, oyinxusa lasePhilippine e-Iraq, uthe wehlulekile ukuhlala angenzi lutho esebone uBayle engalihloniphi iculo lesizwe njengoba ngisho nabantu bokufika ebebekhona bebemile ngezinyawo kodwa yena ehlezi phansi, edla.
UCato uthe ubecasuke efa ngesikhathi ebukela ifilimu ngaphambi kokuba abize amaphoyisa, abophe uBayle.
Imibiko ithi uBayle uyaziphika lezi zinsolo.
Amaphoyisa athi izinja zasendle ezicanasayo zibulale izingane eziyisithupha ngesonto eledlule enyakatho yeNdiya, kanti izakhamuzi kuthiwa zisale zikhungathekile kulandela lesi sigameko.
Kuthathe izinsuku ezingu-9 nodokotela abathathu ukukhipha ikokoroshe elangena endlebeni yowesifazane waseFlorida elele.
Cape Town - 17:34:11 PM CRASH before Plattekloof - all lanes open - QUEUING TRAFFIC from Bellville Ezinye zasemigwaqeni